'Afartii qof ee aan jimicsi samayn mid ayaa khatar ku jira' WHO - BBC News Somali
'Afartii qof ee aan jimicsi samayn mid ayaa khatar ku jira' WHO
6 Sebtembar 2018
Xigashada Sawirka, Thinkstock
Shaqooyinka fadhiga badan u baahan lama amaanin
Khubarada dhinaca caafimaadka ayaa walaac ka muujisay in wax aad u yar laga qabtay sidii loo yarayn lahaa saameynta ka dhalata dhaqdhaqaaq la'aanta ama jimicsiga ku yar dadka ku nool caalamka.
War bixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu qiyaasay in afar meelood hal meel oo ka mid ah dadka dunida - oo ah tiro dhan 1.4 bilyan oo ruux aysan samaynin jimicsi ku filan, tiradan ayaana sare u sii kacaysay tan iyo sannadkii 2001-dii.
Dhaqdhaqaaq la'aanta ayaa sababta in dadka ay soo wajahaan xaalado caafimaad darro sida iney qofka ku dhacaan cudurrada wadnaha, nooca labaad ee cudurka macaanka ama sokorowga iyo noocyo ka mid ah cudurka cancer-ka.
Sidee ugu habboon oo qof sooman u samayn karaa jirdhis iyo jimicsi?
Lixdan jirka jirdhiska ku caafimaaday
Xigashada Sawirka, Public Health England
Noocyada jimicsiga ee caafimaad-qabka leh
Walaac aad u weyn
Cilmi baareyaasha hay'adda caafimaadka adduunka ee (WHO) ayaa macluumaadkan ku saleeyay xog laga uruuriyay ilaa 168 waddan oo dadkooda ay si shakhsi ahaan ah uga warramayeen xaaladahooda.
Khubarada ayaa ogaaday in waddamada dhaqaalahoodu sarreeyo, sida ingiriiska iyo Mareykanka, ay shacabkoodu khatarta ugu badan ugu jiraan saameynta ba'an ee ka dhalata dhaqdhaqaaq la'aanta.
Waddamada kale ee safka hore uga jira liiska jimicsi la'aanta waxaa ka mid ah Jarmalka iyo New Zealand.
WHO ayaa sheegtay in jimicsi la'aanta ay hadda noqotay dilaaga cusub ee bani'aadanka, maadaama ay dad fara badan ka dhaxleen cudurro aan la daaweyn Karin.
Dr Regina Guthold, oo hogaamineysay daraasadda WHO ayaa tiri "Marka laga soo tago khataraha caafimaad ee kale ee adduunka ka jira, wali wax hoos u dhac ah lagama arko dhibaatooyinka ka dhasha dhaqdhaqaaq la'aanta"
"Gobollada uu ku sii kordhayo xaddiga jimicsi la'aanta jirka ayaa nagu abuuraya walaac weyn oo ku aaddan iney soo food saaraan cudurro aan daawo lahayn."
Dr Cali Macow Aweys oo BBC-da ay arrintaan ka wareysatay ayaa sheegay in cudurro fara badan oo halis ah ay ka abuurmaan jimicsi la'aanta.
"looma baahna in ay dadka iska fadhiyaan mar kasta waana in ay cunaan raashin nafaqo leh" ayuu yiri Dr Aweys.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri "Dhaqdhaqaaq la'aanta waxay sababtaa in aysan murqaha qofka shaqeynin ka dibna waxaa meesha soo gala cudurro halis ah oo ku dhaca kalyaha, beerka, wadna waxaana xitaa ka dhalan kara cudurka Kansarka".
Dr Macow ayaa intaas ku daray in cudurka Sokorowga uu ka dhasho dhaqdhaqaaq la'aanta, balse dadku aysan intooda badan fahansaneyn.
Talooyin jimicsi oo loogu tala galay dadka ay da'dooda u dhaxeyso 19-64 sano.
Socodka oo la boobsiiyo.
In baaskiil lagu kaxeeyo dhul siman iyo dhul xoogaa kor u kacsan.
Iyo noocyada kale ee ciyaaraha fudud.
Rucleynta ama orodka.
Dabaasha deg degga ah.
In baaskiil loo kexeeyo si xawaare dheer ama in dalcad la saaro.
Tennis-ka halka ruux.
Iyo noocyada kale ee ciyaaraha adag.
Dalalka ay dhaqdhaqaaq la'aanta heerka ugu sarreeya ka joogto ayaa kala ah:
Dr Mike Brannan oo hogaamiya hay'adaha u dhaqdhaqaaqa jimicsiga dadweynaha ee dalka Ingiriiska ayaa isagana ka dhawaajiyay in natiijada laga soo saaray daraasaddan ay muujineyso sida loogu jiro khatarta.
Muxuu Turkigu u diidayaa in Finland iyo Sweden ay ku biiraan Nato?
Xasan Sheekh oo laga dalbaday Soomaali heshiis ah
TOOS Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey oo farriin u diray Xasan Sheekh Maxamuud
Xaguu daggan yahay Xasan Sheekh, yaa ilaalinaya iyo xog kale oo ku saabsan maalintiisii koowaad
Jabuuti iyo sagaalka dal ee kale ee ugu kulul dunida sanadkan 2022
Shan waxyaabood oo aad ku ogaan karto inaad qof jeceshahay iyo in kale